Accueil > Gazetin'ny nosy > Tsy maty manota : Tsy ho foana ao anatin’ny repoblika faha-4
Araka ny fandaharam-potoana ao amin’ny Antenimierampirenena dia omaly talata no tokony nohadihadian’ny vaomiera momba ny fitsarana avo (HCJ) eo anivon’ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity ny ampahany amin’ireo mpitondra fanjakana teo aloha voarohirohy ho nanodikodina volam-bahoaka ary hananan’ny fitsarana avo “dossier”. Mpitondra fanjakana roa teo aloha no nampiantsoan’ny vaomiera, omaly, saingy tsy nisy tonga namaly izany ireo voampanga na dia eto an-tanindrazana aza.
Mampiseho miharihary izany fa tsy misy hiraharahin’ireo voampanga an’ireo solombavambahoaka izay tsiahivina ihany fa tompon’ny fanapahan-kevitra amin’ny tokony hanenjehana ireo voarohorohy na tsia. Na nangalatra vola amina miliara ariary maro aza ny mpitondra fanjakana iray ka nisy nitory eo anivon’ny fitsarana avo, dia tsy azo henjehina mihintsy raha tsy manome alàlana ny Antenimierampirenena. Andrasana moa ny fanapahan-kevitra ho raisin’ireo depiote mandrafitra ny vaomiera momba ny fitsarana avo manoloana izao tsy fahatongavan’ny voampanga izao. Tsy fantatra intsony ny tena marina satria mety misy ihany koa ny firaisana tsikombakomba eo amin’ireo depiote sy ireo mpitondra fanjakana teo aloha voampanga ka sarimehitsika fotsiny no mandeha eny Tsimbazaza.
Rehefa tena dinihana dia tsy ao anatin’izao repoblika faha-4 izao mihintsy no ho foana ny tsy maty manota eto Madagasikara satria ny lalàmpanorenana izay mametraka ny fitsarana avo sy io fombafomba afahana manenjika ireo mpitondra teo aloha nangalatra volam-bahoaka io mihintsy no fositra. Maninona moa ny olom-pirenena mangalatra akoho eny amin’ny fokontany no miditra am-ponja haingana rehefa tratra fa ny mpitondra mangalatra volam-bahoaka amina miliara maro no tsy maintsy mahazo alàlana avy amin’ny depiote tsy mahalala afa-tsy ny tombotsoany no azo henjehina? Raha tena hiady amin’ny tsy maty manota isika eto Madagasikara dia ny lalàmpanorenan’ny repoblika faha-4 mihintsy no mila fanovana.